Milateriga Fransiiska oo soo bandhigay qalab casri ah oo dunida ka yaabiyay - BBC News Somali
Milateriga Fransiiska oo soo bandhigay qalab casri ah oo dunida ka yaabiyay
Image caption Qorigan ay soo bandhigeen ciidammada Fransiiska ayaa la sheegay in uu awood u leeyahay in lagaga hortago diyaaradaha Drones-ka
Milateriga dalka Fransiiska ayaa dabaal dagga maalinta gaarda ciyaarka milateriga dalkaas ee Bastille oo la qabto 14-ka bisha July ee sanad walba ku soo bandhigay qalab casri ah oo sameyntiisa ay hindistay shirkadda tiknolojiyadda iyo seyniska ee Science Fiction.
Qalabkan ayaa isugu jira qori lagaga hortago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Drones-ka iyo qof ku duulaya qalab sida diyaaradaha oo kale hawada galaya oo qori uu ku rakiban yahay.
Qorigan ay soo bandhigeen ciidammada Fransiiska ayaa la sheegay in uu awood u leeyahay in lagaga hortago diyaaradaha Drones-ka ee wax basaasa ama wax lagu weeraro, sidoo kalena lagu khalkhal galin karo signalka diyaaradda.
Warbixin ay dhawaan soo saartay wakaaladda horumarinta difaaca ee dalkaas ayaa lagu sheegay in dadka ka shaqeeya horumarinta milateriga ee Fransiiska ay hiigsanayaan horumar kale, kaas oo ah qalab lagaga hortagayo weerarada, milateriga kale ee caalamku na aysan ku fikiri karin.
Waxayna intaa raaciyeen in shaqada qarsoon ee kooxdan ay muhiimm u noqon doonta dagaalka ka dhanka ah kuwa naceybka u haya dalkaas.
Milateriga Fransiiska ayaa sidoo kale lagu wadaa inay hirgeliyaan "koox khatar ah" oo ka tirsan shirkadda ka shaqeysa tiknoljiyadda iyo seyniska ee sci-fi, kuwaas oo ka shaqeyn doona sidii looga fikiri lahaa khatarta mustaqbalka la wajihi doona.
Tallaabooyinkan ay qaadayaan milateriga dalkaas ayaa imaneyso xilli dowladda dalkaas ay ka shaqeneyso sidii loo horumarin lahaa hannanka difaaca ee Fransiiska.
Madaxweynaha Fransiiska, Emmanuel Macron oo markii la soo bandhigay qofka ku duulaya qalab sida diyaaradaha oo kale hawada galaya ayaa bartiisa Twiter-ka ku qoray "Aad ban ugu faraxsanahay ciidankeena iyo qaabka casriga ah ee ay wax u hindisaan".
Image caption Qof ku duulaya qalab sida diyaaradaha oo kale hawada galaya oo qori uu ku rakiban yahay.
Yay yihiin 'kooxda khatarta'?
Kooxdan 'khatarta' ah ayaa waxay ka kooban yihiin afar ilaa iyo shan qof oo ka tirsan shirkadda sci-fi, waxaana kooxdan laga dhowrsugayaa inay hindisaan, oo ay soo bandhigaan qalab milateri oo casri ah, kuwaas oo ka duwan kuwa caalamka yaala xiligan.
Kooxdan oo adeegsan doona farsamooyin kala duwan ayaa waxa kale oo ay ka fikiri doonaan sida kooxaha "argagixisada" ama dalalka dibadda ay u adeegsan karaan tiknolojiyadda casriga ah ee dhanka milateriga.
Wasiirka gashandhiga ee dalka Fransiiska, Florence Parly ayaa wuxuu sheegay in dalkiisa uu heysto waxwalba oo u sahli kara loollanka dhanka qalabka milateriga ee caalamka.
Waxaa kale oo jiray qorshe ah in ciidammada Fransiiska ee jooga dalka Mali loo geeyo robot (qalab la isku rakibay oo bani'aadamka loo ekeysiiyo, mashiinna ku shaqeeyo), kaas oo tijaabadiisa ay haatan socoto.
Image caption Dabaaldagga Bastille
Maxay tahay shirkadda sci-fi?
Shirkadda sci-fi oo ka dhigan Science fiction ayaa ah shirkad takhasus gaar ah u leh arrimaha seyniska iyo tiknoljiyadda, waxayna horay u sameysay qalab badan oo casri oo isugu jira qalab milateri iyo kuwa kale.
Sanadkii 1927 ayaa shirkadan waxay sameysay taleefoonkii ugu horeeyay ee muuqaal duuba, inkastoo taleefoonkii xiligaas ay sameesay uu ahaa mid ka weyn kan haatan caalamka laga isticmaalo.
Dalka Fransiiska ayaa ka mid ah dalalka caalamka ee dhoofiya hubka milateriga kuwooda ugu badan, waxaana milateriga dalkaas lagu tilmaamaa in uu yahay mid ka mid ah kuwa ugu awooda badan dunida marka laga hadlayo qalabka iyo hubka casriga ah ee ay heystaan.